Mozilla naTor Joinha Mberi Kudana kuti Stallman Asiye Iyo Mahara Software Foundation | Linux Vakapindwa muropa
Mamwe mazwi anowedzera kusimudzwa kuratidzira kudzoka kwaRichard M. Stallman (RMS) kubhodhi revatungamiriri veFree Software Foundation (FSF) uye ndezvekuti zviuru zvevanhu nemasangano esoftware yemahara uye yakavhurika sosi yenzvimbo (Vhura Source Initiative, Software Freedom Conservancy, Apache Software Foundation) kuenda zvakare uye ikozvino Mozilla naTor vava pakati pevaratidziri.
Sezvatakataura nezuro, Dzvinyiriro iri kuwedzera kuna Stallman, uyo adzoka kubhodhi reFSF, kuti adzingwe musangano raakagadzira uye raanga ari mucherechedzo kwemakumi emakore.
Kumwe kwekutanga kuita kwakabva kuOpen Source Initiative (OSI), iyo yakati yakatsamwa nechiziviso. Maawa mushure mekuziviswa, akati achamira kushanda neFree Software Foundation kana RMS ikasasiya basa kubva kubhodhi revatungamiriri. Kwaari, "Stallman haaratidzi mutungamiri uyo nharaunda inoda kuve naye."
Gare gare mazana emahara software uye yakavhurwa sosi vatsigiri vakasaina tsamba yakavhurika kushevedza muvambi weFree Movement kuti adzose apuroni yake, asiwo kubhodhi rese revatungamiriri reFSF kuti vasiye chigaro. Iko kukurudzira kwekubva kweRMS kubva kune ayo ese manejimendi nzvimbo mune yemahara software nharaunda ine mavambo ayo mune zvirevo zvake zvinofungidzirwa zvinovhiringidza zvine chekuita nebonde revadiki nemitemo ine chekuita nekuona zvinonyadzisira kwevana. Kana iri iyo FSF bhodhi revatungamiriri, vanokumbira vanoipomera kuti inoratidza "yakawedzeredzwa" kungoita.
Vakasaina chikumbiro iIvo vanosanganisira vanogadzira, vanopa, uye vakuru vakuru kubva mahara software uye yakavhurika sosi masangano nemapurojekiti, kusanganisira GNOME Foundation, Open Source Initiative, Software Freedom Conservancy, Apache Software Foundation, Wikimedia Foundation, EFF, nezvimwe.
Kune zvekare vadzidzi, uye kunyange aimbove MEP kubva kuSweden Pirate Party, mune iyi nyaya Amelia Andersdotter. Wese munhu ari kutaura achipokana nemaitiro anoonekwa seasina kufarirwa neRMS, iyo yavanofunga kuti munzwa parutivi rwemahara uye yakavhurika sosi software nharaunda.
Kubva payakatangwa neMuvhuro, huwandu hwevasainira chikumbiro hwakura nekukurumidza.
Nhasi, vanhu vanopfuura zviuru zviviri nemasangano vakatosaina. Tor naMozilla vakabatana nerondedzero neChitatu. “Hatigone kukumbira zvirinani kubva paInternet kana tisingadi nani kubva kuvatungamiriri vedu, vatinoshanda navo, nesu pachedu. Takamira neyakavhurika sosi yenharaunda, Outreachy uye Software Conservancy chirongwa uye tinotsigira chikumbiro ichi, ”Mozilla yakanyora papeji yayo yeTwitter nezuro. Saka Stallman ari kuenda here? Zvikasadaro, iyo yemahara software uye yakavhurika sosi nharaunda inoenda?
Mukukumbira kusiya basa kweFSF bhodhi revatungamiriri, Varongi vechikumbiro ichi vanotaura nezvekupomerwa kwekushungurudzwa, zvakataurwa naStallman nezvevanhu vane Down syndrome, uye zvaakadzokorora pamusoro pezita reumwe "ivo," avo vanokumbira vanoti "kusanzwisisika kwakajeka."
“Panga paine shiviriro yakakwana yemifungo inosembura nehunhu zveRMS. Hatigone kuramba tichitendera munhu mumwe kuti akanganise zvinoreva basa redu ”, nyora varongi vechikumbiro.
"Nharaunda dzedu hadzina nzvimbo yevanhu vakaita saRichard M. Stallman, uye hatirambe tichitambura nekuda kwehunhu hwake, kana kumupa chinzvimbo chehutungamiriri, kana kumuona iye nemafungiro ake seanokuvadza uye ane njodzi," seyakagamuchirwa. ", vakatsamwa. . Kune rimwe divi, ramba uchifunga kuti Stallman ndomumwe wehunhu huzhinji mune tech counterculture maitiro ayo, akambofungidzirwa kungori eccentric, anga achizivikanwa zvakanyanya sekushusha.
Semuenzaniso, iye musiki weLinux, Linus Torvalds, akazviwanawo ari mumamiriro akafanana makore mashoma apfuura. Torvalds akabva muprojekti muna 2018 mushure mekunge New Yorker yataura makore ezvainzi "maemail anoshusha" kune dzimwe nhengo dzechirongwa.
Yakazara nzira kuchinyorwa: Linux Vakapindwa muropa » General » Noticias » Mozilla naTor vanobatana neyemberi mutsara wekudaidzira kuti Stallman abve muFree Software Foundation
Ini ndinofunga mozilla inofanirwa kutarisa mukuvandudza browser yayo uye nekusiya vezvenhau.
Tor yakagadzirwa neNSA.
Hakuchina mimwe mibvunzo, Changamire.
Iyo yakagadzikana vhezheni yeAlmaLinux yakatoburitswa kare